Nepali Rajneeti | होसियार ! यी पाँच सपना झुक्किएरपनि कसैलाई नभन्नु
होसियार ! यी पाँच सपना झुक्किएरपनि कसैलाई नभन्नु
फागुण ७, २०७७ शुक्रबार ७१५ पटक हेरिएको
हाम्रो जन्म कसरी भयो त भन्ने सत्यतामा एकछिन सोच्ने हो भने पक्कै सृष्टिकर्ताको खोजीमा घोत्लिन्छौ ।
तर यो अहिलेसम्मको अनुत्तरित प्रश्न हो । यसमा धेरै नजाऔँ । तर हामी केही कुरामा विश्वास गर्न बाध्य छौ ती कुराहरुको बारेमा केही उल्लेख गरौँ । सपना धेरै मानिसले देख्छन् ।
निधाएको बेला फिल्मजस्तै आउँनु र स्मरणमा रहनुलाई सपना भनिन्छ ।
कहिले कल्पना गरेका कुरा देखिन्छ त कहिले कल्पना भन्दा बाहिरका कुरा देखिन्छ । अब ती कस्ता सपना चै अति नै महत्वका हुन्छन् कस्तो सपना देख्दा कस्तो फल मिल्छ भन्ने कुरो अति महत्वपुर्ण हो ।
हरेक दिन हेरक मानिसले फरक फरक सपना देख्ने गर्छन् । कतिले त बिहान उठ्दा के सपना देखिको त्यो पनि बिर्सन्छन् । सपना बिर्सिएमापनि त्यसको कुनै प्रभाव पर्दैन । तर बिर्सिन्छु भनिएका सपना चाहेरपनि बिर्सिन सकिन्न ।
सपना भनेको दिनभरीको काम अनि सुत्नुभन्दा अगाडी सोचिएको विषयलाई नै सपनामा देख्ने गरिन्छ भन्ने विश्वास रहिआएको छ । तर हरेक केही सपना कल्पना गरेभन्दापनि फरक पाइन्छ । सपनाको आ–आफ्नै महत्व रहेको हुन्छ । त्यही भएर सबै सपना अरुलाई भन्नु हुँदैन भन्छन् ज्योतीष शास्त्रीहरु ।
१, बलिरहेको दियोको साथमा भगवान प्रकट भएको देखेमा : बलेको दियो हाम्रो हिन्दु सस्ंकारमा शुभ मानिन्छ । यदि यस्तो सपना देख्नुभो भने तपाईलाई चारै तिरबाट अवसर नै अवसर प्राप्त हुन्छ ।
यो सपना कसैलाई भन्नु हुँदैन । किनकी त्यो ज्योतिमा देखिनुभएका भगवान तपाईका्े भाग्य उदयका लागि प्रकट हुनुभएको हो । यो सपना जो कोहीले देख्नै सक्दैन । क्रिपया भुलेर वा झुक्किएरपनि यो सपना कसैलाई नभन्नुहोला ।
२, सानो माछा देख्नु भएमा : यदि सपनामा साना माछा पकाएको वा खाएको सपना देख्नु भो भने यस्तो सपनाले तपाईलाई आकस्मिक लाभ प्राप्त हुन्छ । माछालाई देवताका प्रतिक पनि मानिन्छ ।
मान्नुस् कि तपाईमा भगवानको कृपा सुरु भयो । भाग्यको खेल अब सुरु भएको छ । सपकना नभनि मेहनत गर्न थाल्नुहोस् । अब भाग्य जगमगाउनेछ ।
३, फलफुल भएको हरभरा बगैंचा देखेमा : आफ्नो घरवरिपरि वा कतै कुनै वृक्षमा फल लागेको सपना देख्नु भयो भने यसले तपाईले जिवनमा चाहेको सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
यो सपनाले तपाईको मनोकांक्षा पूरा गर्ने लक्षण देखाएको छ । सुद्ध मन राखि बिहानै उठेर भगवानको आराधाना गर्नुहोस् । आफुलाई मन पर्ने भगवानलाई जप्नुहोस् । यसले तपाईलाई लाभ दिनेछ ।
४ साँप वा नाग देख्नु भएमा : सपनामा साँप देखियो भने हामी नागको दोष भनेर नाग पुजा गर्छौ, तर यो एकदम राम्रो सपना हो । यस्तो सपना अरु कसैलाई भन्नु हुँदैन ।
सपनामा साँपले लखेटेको, वा क्षति गर्न खोजेको आदि देख्नुभयो भने तपाईलाई चाडै धन, मान —सम्मान प्राप्त हुन्छ । यो सपना गुपचुप राख्नुहोस् । धन र मान थाप्न तयार हुनुहोस् ।
५, सपनामा आफूलाई मृत अवस्थामा देखेमा : यस्तो सपना देखेमा यसले तपाईको जिवनमा भइरहेको सबै समस्या अन्त्य गरेर खुसी प्रदान गर्न सहयोग गर्दछ ।
आफन्त कोहीको मृत्यु भएको देख्नुभयो भने त उहाँको आयू बढेको मानिन्छ भने तपाई आफै त्यस्तो भएको देख्नुभयो भने यसले अब तपाईका सारा समस्या हराएर जानेछन् ।